PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-29 - UDavids udalula izizathu ezenza ezakhe zidonse kanzima
UDavids udalula izizathu ezenza ezakhe zidonse kanzima
Isolezwe ngeSonto - 2017-10-29 - EZEMIDLALO - NHLANHLA SITHOLE
UFADLU Davids, oqeqesha iMaritzburg United ucabanga ukuxhoza omunye umphini ngemuva kokuhlala obala kokuthi amaqembu asebafundile ukuthi badlala siphi isitayela nosekuholele ekutheni umfutho abaqale ngawo udambe.
UDavids ukusho lokhu ngemuv akokuthi ezakhe zikhishwe kabuhlungu yiPlatinum Stars ngo 3-1 kwiTelkom Knockout, emdlalweni okuphoqeleke ekutheni lamaqembu agcine ekhahlele amaphenathi.
Lokhu kungenxa yokwehluleka kwala maqembu ukubhakuzisa inethi emuzizuwini engu-90 nasesikhathini esingeziwe emdlalweni obuseHarry Gwala Stadium, eMgungundlouvu, ngoLwesihlanu ebusuku.
Ukujika kwezinto kwiTeam of Choice kufanele kubonakale emdlalweni ezowudlala neBloemfontein Celtic, eDr Molemala Stadium, eMangaung, ngoLwesibili ngo 7.30 ebusuku.
Exoxa nabezindaba ngemuva komdlalo uthe okwenza abafana bakhe badonse kanzima emidlalweni yakamuva kungenxa yokuthi wonke amaqembu asevule amehlo ngezinga labo.
“Ukuqala kwethu ngomfutho yikhona engibona ukuthi sekwenze amaqembu aqala ukusihlonipha uma ezodlala nathi. Amaqembu adlala nathi esehlele kahle amaqhinga azosivimba ngawo. Amanye afike abeke imigoqwane emuva, nokuyinto engeke sikhale ngayo.”
Uthi okubalulekile wukuthi kufanele baqhamuke nelinye iqhinga abazolisebenzisa ukuqinisekisa ukuthi bayayigudluza yonke lemigoqwane abasuke bebekelwe yona ngozakwabo bamanye amaqembu. “Mhlawumbe kuzofanele sishintshe indlela esigadla ngayo sakhe elinye icebo lokugqobhoza phambili,” kusho uDavids.
Abafana beTeam of Choice baqale isizini ngegiya eliphezulu bethela induku kwasani abahlangana nayo. Bathuse abantu abaningi ngesikhathi bengabahloniphi ompetha baseAfrika iMamelodi Sundowns beyiwashisa ijezi kwiMTN 8, bakhishwa kulo mqhudelwano yiSuperSport United egcine ingompetha bawo.
Emidlalweni yePremiership baqale njengomlilo wequbula ngokushaya iDikwena ngo 2-0 beyishayela phambi kwabalandeli bayo.
Ngemuva kwalokho badlulela kwi-Ajax Cape Town nayo abayithele phansi ngo 2-0 ekhaya. Ukuguquka kwesimo kuqale emdlalweni abadlale kuwona ngokulingana naMaZulu kuba ngu 1-1. Leli qembu eliyithemba laseMphithi liqale lashayelwa ekhaya yiKaizer Chiefs ngo 2-0.
Lo mphumela kwaba sengathi yingoba abadlali bese benokuzitshela ukuthi sebe ngamaqhawe.
Kube yilomdlalo lapho umqeqeshi weTeam of Choice atshela khona abezindaba ukuthi kube yisibusiso ukuhlulwa yiChiefs ngoba lokho kuzokwenza abadlali bakhe baqwashe.
Isilonda siqhubekile nokubhibha ngoba baphinde bazithola sebethola olunye uswazi beguqiswa kwiFree State Stars ngo 1-0.
Umphumela ongcono ngemuva kwale miphumela emibi kube yilowo abambane kuwo ngo 0-0, neChippa United ekuhambeni.